Thiago Silva Oo Magacaabay 10kii Weeraryahan Ee Ugu Wanaagsanaa Kubadda Cagta - GOOL24.NET
Thiago Silva Oo Magacaabay 10kii Weeraryahan Ee Ugu Wanaagsanaa Kubadda Cagta
Difaaca reer Brazil ee Thiago Silva ayaa magacaabay tobankii weeraryahan ee uu ku silcay sidii uu u joojin lahaa oo uu qaarkood ka hor tegay, qaar la ciyaaray, kuwo kalena daawaday, waxaana uu markiiba soo qabtay xiddigaha Juventus iyo Barcelona ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Thiago Silva oo ay da’diisu tahay 36 jir ayaa waqtiyo qurux badan kusoo qaatay garoomada, isagoo usoo ciyaaray kooxaha Fluminense, AC Milan, Paris Saint-Germain iyo Chelsea oo uu hadda u ciyaaro.
Laacibkan ayaa sidoo kale kabtan usoo noqday xulka qaranka Brazil oo uu la qaaday Confederations Cup 2013 iyo Copa America 2019.
Waqtiyadan uu garoomada ku jiray, Thiago Silva waxa soo maray ciyaartooyo badan oo wanaagsan, hase yeeshee waxa si gaar ah ugu calaamadsan toban laacib oo uu qaarkood ku dhibaatooday sidii uu u joojin lahaa.
Silva oo waraysi bixiyey ayaa amaan u jeediyey xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oo uu sheegay inuu guulo badan ka gaadhay kubadda cagta iyo Lionel Messi oo uu qiray inuu yahay ciyaartoy layaable.
Website-ka Chelsea oo waraysi ka qaaday Thiago Silva ayaa weydiiyey weeraryahannadii uu ku dhibaatooday inuu joojiyo, waxaanu ku jawaabay: “Angel di Maria, sababtoo ah farsamadiisa iyo lugtiisa bidix ee cajiibka ah.
“Kylian Mbappe, sababtoo ah orodkiisa iyo farsamadiisa.
“Didier Drogba, sababtoo ah awooddiisa jidheed, ka sokow xoogiisa, waxa kale oo uu lahaa xirfado badan.
“Roberto Firmino, waxa uu leeyahay farsamooyin cajiib ah iyo tayo sare sare. Waa ciyaartoy caqli badan oo sameeya dhaqaaq uu difaacyada ku fashiliyo.
“Romario, sababtoo ah wuxuu ahaa ciyaartoy cajiib ku ah xerada ganaaxa. Waa ciyaartoygii ugu wanaagsanaa abid ee aan ku dhex arko xerada ganaaxa.
“Adriano, sida Drogba oo kale, wuxuu ahaa mid jidh ahaan u xoog badan oo leh lug bidix oo awooddeeda aanad rumaysan karaynin.
“Waxaan sheegayaa in Zlatan Ibrahimovic uu yahay ciyaartoyga afraad sababtoo ah wuu i dhiirigeliyey, waxaanay ila tahay inuu da’yar badan tusaale u noqday. Wuxuu haystaa suunka madow (suunka lagu qaato ciyaaraha feedhka iyo laadka ee MMA) oo uu qaatay ka hor intii aanu kubadda cagta ciyaarin. Waa ciyaartoy ay dad badan ka helaan, aniguna aan helay fursad aan kula ciyaaro mar labaad.
“Neymar, sababtoo ah waa ciyaartoy heersare ah, caqli badan oo mucjiso ah. Waa ciyaartoyga igaga yaabiyey tayadiisa farsamo iyo awooddiisa hal abuurka ee aanu meel fog ka doonin.
“Cristiano Ronaldo sababtoo ah xirfadlenimadiisa, naf-hurka iyo samirka uu u hayo kubadda cagta. Waa ciyaartoy aan dhab ahaantii ka helo ka go’naanshihiisa iyo guulaha uu gaadhay.
“Messi, sababtoo wuxuu leeyahay tayo layaableh iyo hibo Ilaahay siiyey iyo sababtoo ah inuu yahay xirfadle. Aniga waxay ila tahay isaga ayaa ugu wanaagsan.”